Vaovao - Fampidirana kitapo misy fitoeran-javatra
Kitapo misy valizy
Kitapo fonosana fitoeran-javatra, fantatra koa amin'ny kitapo maina misy kaontenera, kitapo vovo-dronono maina, fitoeran-tsivalana. Matetika apetraka ao anaty fitoeran-tongotra 20 na 40 tongotra izy io. Ny kitapo anatiny misy ilay kaontenera lehibe dia afaka mitondra fitaovana matevina sy vovoka amin'ny taonina lehibe. Satria fitaterana anaty kaontenera io dia manana tombony amin'ny habetsahan'ny fitaterana enta-mavesatra, mora ny fandefasana sy ny famoahana entana, mampihena ny herin'ny asa ary tsy misy fandotoana entana faharoa, ary mamonjy ny fandaniana sy ny fotoana lany amin'ny fitaterana fiara sy sambo ihany koa. Ny firafitry ny harona kitapo fitoeran-javatra dia natao arakaraka ny entan'ny mpanjifa sy ny fitaovana fikirakirana ampiasaina. Izy io dia azo zaraina amin'ny famoahana ny farany ambany sy ny fanesorana ny ambany ary ny fandefasana azy eo ambony ary ny fanesorana ny farany ambany. Raha ny fomba fampidiran'ny mpanjifa sy ny famafana azy dia azo ampiasana amin'ny seranan-tsambo fampidinana sy famoahana (tanany), zipper ary endrika hafa. Ankoatr'izay, araka ny fangatahan'ny vokatra, dia hamolavola kitapo rivotra, fitaovana fanodinana rivotra sns, izay mety kokoa amin'ny famoahana entana.
Kitapo ara-materialy an'ny kitapo misy fitoeran-javatra:
Main lamba PE / PP tenona lamba - 140gsm na araka ny takian'ny mpanjifa.
Sarimihetsika PE - 0.10-0.15mm, na arakaraka ny takian'ny mpanjifa.
Izy io dia seranan-tsakafo fihinana misy varingarina miaraka amin'ny fivoahan'ny rivotra, mety amin'ny famoahana azy.
Seranan-tsakafo famelana mahitsizoro miaraka amin'ny zipper (azo hitarina hisokatra), mety amin'ny fametahana amin'ny fehikibo conveyor.
Ny isan'ny seranan-tsambo fanalefahana, arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Baffle PP / PE tenona lamba na PE sarimihetsika, araka ny mpanjifa takiana.
Vy vy toradroa 40x40x3x2420mm, faribolana 4 / faribolana 5/6. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny tena fitaovan'ny harona fisaronana kaontenera matetika dia lamba voatenona PE, sarimihetsika PE ary lamba voatenona PP.
1. Vokatra mikoriana maimaim-poana tsy mampidi-doza.
Soybean, tsaramaso kafe, orza, varimbazaha, katsaka, vovoka kakao, sakafon-trondro, lafarinina, vovo-dronono, pitipoà, voanemba, voanjo, voanjo, vary, sira, voa, paty, siramamy, dite, sakafom-biby, sakafom-bary mifangaro, sns .
2. Entam-bary lehibe na vovoka
PTA, vovoka zinc, vongan-kazo polyethylene, sombina polypropylene, polymer nylon, resina ABS, sombina polycarbonate, vovoka aluminium, zezika, vakana fitaratra, sombina polyester, vongan-tany PVC, vovo-soda, vovoka zinc, detergent, tanimanga porcelain, dioxide titanium, sns.
Ny tahan'ny fampiasana habakabaka amin'ny kaontenera lehibe dia lehibe lavitra noho ny kitapom-bolongana na kitapo tonta. Afaka mamonjy ny vidin'ny fonosana izy ary mampihena ny vidin'ny asa.
Izy io dia mety amin'ny karazana fomba fampidinana sy famoahana entana isan-karazany, ary ny fandefasana sy ny famoahana entana dia mety sy haingana. Fohy ny fotoana fanadiovana kaontenera ary vonjeo ny vidin'ny fanadiovana kaontenera.
Ny hamandoana, tsy misy vovoka, misoroka ny fandotoana ivelany.
4. Tonian-dahatsoratry ny kitapo misy fitoeran-javatra
Kitapo nilahatra zipper. Mety amin'ny fandefasana sakafo trondro, sakafo taolana, malt, tsaramaso kafe, tsaramaso kakaô ary sakafom-biby.
Ao anaty kitapo misy fijanonana varavarana telozoro mivadika. Izy io dia mety ho an'ny entana be mpampiasa toy ny siramamy.
Ny kitapo anatiny amin'ny seranana famoahana boaty. Mety amin'ny famoahana vokatra karbonika mainty sy vovoka hafa.
Kitapo nilahatra feno. Mety amin'ny fametahana palety na volom-biby.
Kitapo anaty entana farany ambony. Mety amin'ny entana maina marobe entin'ny hery misintona.
5. Dingana fametrahana
Apetraho ao anaty fitoeran-tsaka madio ny kitapom-batsy anatiny ary velarina.
Apetraho amin'ny tanany ny vy vita toradroa ary apetaho amin'ny tany.
Afatory mafy ny peratra elastika sy ny tady amin'ny kitapo anatiny mba ho amin'ny peratra vy ao anaty kaontenera. (avy amin'ny lafiny iray, ambony sy ambany, avy ao anatiny ka hatrany ivelany)
Ny faran'ny kitapo eo am-baravaran'ny boaty dia raikitra amin'ny peratra vy amin'ny tany amin'ny tady hisintonana mba tsy hihetsika ny kitapo anatiny mandritra ny famoahana.
Bara vy efatra metatra toradroa no miraikitra amin'ny tokonam-baravarana amin'ny alàlan'ny peratra mihantona sy fehikibo fampiatoana. Ny fehikibo fampiatoana azo ovaina dia azo ahitsy arakaraka ny hahavony.
Hidio mafy ny varavarana havia ary atsofohy amin'ny rivotra compressor mba hiomanana amin'ny famoahana
6. Fomba fampidinana sy famoahana entana
Ny faran'ny kitapo eo am-baravarana dia raikitra amin'ny peratra vy amin'ny tany amin'ny tady hisintonana mba tsy hihetsika ny kitapo anatiny mandritra ny famoahana.
Bara vy efatra metatra toradroa no raikitra ao anaty vatan'ny varavarana boaty amin'ny alàlan'ny peratra mihantona sy fehikibo fampiatoana. Ny fehikibo fampiatoana azo ovaina dia azo ahitsy arakaraka ny hahavony.
Hidio mafy ny varavarana havia ary atsofohy amin'ny rivotra compressor mba hiomanana amin'ny famoahana.